DataNumen: Umthetho wabucala
Ikhaya umthetho wabucala
(A) Lo Mgaqo-nkqubo
Lo Mgaqo-nkqubo ukhutshwa ngamaziko adweliswe kwiCandelo M apha ngezantsi (ngokudibeneyo, “DataNumen"," Thina "," thina "okanye" wethu "). Lo Mgaqo-nkqubo ubhekiswa kubantu abangaphandle kombutho wethu esinxibelelana nabo, kubandakanya iindwendwe kwiiwebhusayithi zethu ("iiWebhusayithi" zethu), abathengi, kunye nabanye abasebenzisi beenkonzo zethu (kunye, "wena"). Amagama achaziweyo asetyenziswe kulo Mgaqo-nkqubo acacisiwe kwiCandelo (N) apha ngezantsi.
Ukulungiselela le Polisi, DataNumen nguMlawuli weDatha yakho yobuqu. Iinkcukacha zonxibelelwano zinikezelwe kwiCandelo (M) elingezantsi le-applicable DataNumen Umbutho ungaphendula imibuzo malunga nokusetyenziswa nokulungiswa kweNkcukacha zakho.
Lo Mgaqo-nkqubo unokulungiswa okanye uhlaziywe amaxesha ngamaxesha ukubonisa utshintsho kwindlela esenza ngayo ngokubhekisele kuLungiso lweDatha yobuNtu, okanye utshintsho kwi-applicabumthetho. Siyakukhuthaza ukuba ufunde lo Mgaqo-nkqubo ngocoselelo, kwaye ujonge eli phepha rhoqo ukuphonononga naluphi na utshintsho esinokulwenza ngokwemiqathango yalo Mgaqo-nkqubo.
DataNumen isebenza phantsi kolu phawu lulandelayo: DataNumen.
(B) Ukuqhubekeka kweenkcukacha zakho
Ukuqokelelwa kweDatha yobuNtu: Singaqokelela iiNkcukacha zaKho ngawe:
Xa uqhagamshelana nathi nge-imeyile, umnxeba okanye nangayiphi na enye indlela.
Kwindlela yesiqhelo yobudlelwane bethu nawe (umzekelo, Iinkcukacha zobuqu esizifumanayo ngexesha lokulawula iintlawulo zakho).
Xa sinikezela ngeeNkonzo.
Xa sifumana iNkcukacha zaBakho kubantu besithathu abasinika zona, ezinje ngearhente ekubhekiswa kuyo ngetyala okanye iiarhente zokunyanzeliswa komthetho.
Xa undwendwela naziphi na iiWebhusayithi zethu okanye usebenzisa naziphi na izinto okanye izixhobo ezikhoyo okanye kwiiWebhusayithi zethu. Xa undwendwela iwebhusayithi, isixhobo sakho kunye nesikhangeli sinokuveza ngokuzenzekelayo ulwazi oluthile (njengohlobo lwesixhobo, inkqubo yokusebenza, uhlobo lwesikhangeli, useto lwebrawuza, idilesi ye-IP, useto lolwimi, imihla kunye namaxesha okunxibelelana kwiWebhusayithi kunye nolunye ulwazi lonxibelelwano lobuchwephesha) , ezinye zazo zinokwenza iiDatha zoBuntu.
Xa ufaka i-resume / i-CV yakho kuthi yesicelo somsebenzi.
Ukuyilwa kweDatha yobuNtu: Ukubonelela ngeenkonzo zethu, sinokudala iiNkcukacha zaKho ngawe, ezinje ngeerekhodi zonxibelelwano kunye nathi kunye neenkcukacha zembali yeodolo yakho.
Idatha yobuqu efanelekileyo: Iindidi zeDatha yobuqu ngawe ezinokuthi siyiqwalasele zibandakanya:
Iinkcukacha zakho: amagama (amagama); isini; umhla wokuzalwa / yobudala; ubuzwe kunye nefoto.
Iinkcukacha zoqhakamshelo: idilesi yokuthumela (umz., ekubuyiseleni imithombo yeendaba yoqobo kunye / okanye izixhobo zokugcina); ipheostidilesi; inombolo yefowni; idilesi yemeyile; kunye neenkcukacha zeprofayili yemidiya yoluntu.
Iinkcukacha zentlawulo: Idilesi yetyala; inombolo yeakhawunti yebhanki okanye inombolo yekhadi letyala; umnini-khadi okanye igama lomgcini-akhawunti; ikhadi okanye iinkcukacha zokhuseleko kwiakhawunti; ikhadi 'lisemthethweni' ukusukela kumhla; kunye nomhla wokuphelelwa kwekhadi.
Izimvo nezimvo: naziphi na izimvo nezimvo okhetha ukuzithumela kuthi, okanye esidlangalaleni post ngathi kumaqonga eendaba ezentlalo.
Nceda uqaphele ukuba iiNkcukacha zaKho ngawe esiziqhubayo zinokubandakanya iiNkcukacha zaBantu ezibuthathaka njengoko kuchaziwe apha ngezantsi.
Isiseko esisemthethweni sokuPhathwa kweDatha yobuNtu: Ekuqhubekeni kweDatha yobuqu ngokunxulumene neenjongo ezichazwe kulo Mgaqo-nkqubo, sinokuxhomekeka kwisiseko esinye okanye ezingaphezulu kwezi zilandelayo, kuxhomekeke kwiimeko:
siyifumene imvume yakho yangaphambili yoQeqesho (lo mgaqo wezomthetho usetyenziswa kuphela ngokunxulumene nokuqhubekeka okugcweleyo ngokupheleleyotary - ayisetyenziselwa ukuqhubekeka okuyimfuneko okanye okunyanzelekileyo nangayiphi na indlela);
Ukuqhubekeka kuyimfuneko ngokunxulumene nayo nayiphi na ikhontrakthi onokuthi ungene kuyo;
Ukuqhubekeka kuyadingeka yi-applicabumthetho;
Ukuqhubekeka kuyimfuneko ukukhusela iimfuno ezibalulekileyo zakhe nawuphina umntu; okanye
Sinomdla osemthethweni wokwenza ukuqhubekeka ngenjongo yokulawula, ukusebenza okanye ukukhuthaza ishishini lethu, kwaye loo mdla usemthethweni awugqithiswanga ngumdla wakho, amalungelo asisiseko, okanye inkululeko.
Ukuqhubekeka kweDatha yakho yobuNtu: Asifuni ukuqokelela okanye ukuqhubekekisa iiNkcukacha zaKho ezibuthathaka, ngaphandle kwalapho:
Ukuqhubekeka kuyadingeka okanye kuvunyelwe yi-applicabumthetho (umzekelo, ukuthobela uxanduva lwethu lokunika ingxelo ngokwahluka);
Ukuqhubekeka kuyimfuneko ekufumaneni okanye ekuthinteleni ulwaphulo-mthetho (kubandakanya ukuthintela ubuqhetseba, ukuxhaphaza imali kunye nokuxhasa abanqolobi ngemali);
Ukuqhubekeka kuyimfuneko ekumiseni, ekusebenziseni okanye ekukhuseleni amalungelo asemthethweni; okanye
sinawo, ngokungqinelana applicabUmthetho, ufumene imvume yakho ecacileyo ngaphambili ngaphambi kokuPhathwa kweNkcukacha zaBantu eziButhathaka (njengasentla, lo mthetho usetyenziswa kuphela ngokunxulumene nokuSebenza okuqinisekileyo ngokupheleleyotary -ayisetyenziselwa ukuqhubekeka okuyimfuneko okanye okunyanzelekileyo nangayiphi na indlela).
Ukuba usinika ulwazi oluShukumayo lobuqu kuthi (umzekelo, ukuba usinika izixhobo zekhompyutha apho unqwenela ukuba sibuyise idatha) kuya kufuneka uqiniseke ukuba kusemthethweni ukuba usixelele ezo nkcukacha, kubandakanya nokuqinisekisa ukuba enye yeziseko zomthetho okuchazwe ngasentla kuyafumaneka kuthi ngokubhekisele kuLungiso lweeNkcukacha zaBantu eziButhathaka.
Iinjongo esinokuthi siqhubekisele kuzo idatha yakho yobuqu: Iinjongo esinokuthi siqhubekisele kuzo iiNkcukacha zaBantu, ngokuxhomekeke ku-applicabUmthetho, ubandakanya:
IiWebhusayithi zethu: ukusebenza nokulawula iiWebhusayithi zethu; ikunika umxholo; ukubonisa intengiso kunye nolunye ulwazi kuwe xa undwendwela iiWebhusayithi zethu; nokunxibelelana nokunxibelelana nawe kwiiWebhusayithi zethu.
Ubonelelo lweeNkonzo: ukubonelela ngeeWebhusayithi zethu kunye nezinye iiNkonzo; ukubonelela ngeeNkonzo ngokuphendula kwimiyalelo; nonxibelelwano ngokunxulumene nezo nkonzo.
ZoNxibelelwano: ukunxibelelana nawe ngayo nayiphi na indlela (kubandakanya i-imeyile, umnxeba, umyalezo obhaliweyo, amajelo asekuhlaleni, ipheost okanye buqu) ngokuxhomekeke ekuqinisekiseni ukuba olo nxibelelwano uyalunikwa ngokuhambelana ne-applicabumthetho.
Unxibelelwano kunye nokusebenza kwe-IT: ulawulo lweenkqubo zethu zonxibelelwano; ukusebenza kokhuseleko lwe-IT; kunye nophicotho lwezokhuseleko lweIT.
Impilo nokhuseleko: uvavanyo lwezempilo nokhuselo nokugcinwa kweerekhodi; kunye nokuthotyelwa kwezibophelelo ezinxulumene nomthetho
Ulawulo lwezezimali: intengiso; ezemali; uphicotho zincwadi; kunye nolawulo lomthengisi.
Uphando: ukuzibandakanya nawe ngeenjongo zokufumana izimvo zakho kwiiNkonzo zethu.
Ukuphucula iiNkonzo zethu: Ukuchonga imiba neeNkonzo ezikhoyo; ukucwangciswa kokuphuculwa kweeNkonzo ezikhoyo; kunye nokudala iiNkonzo ezintsha.
Ezengqesho: ukulawulwa kwezicelo zezikhundla kunye nathi.
IVoluntarUkubonelela ngeDatha yobuNtu kunye neziphumo zokungabikho kolungiselelo: Ukubonelelwa ngeDatha yakho yobuqu kuthi voluntary kwaye iya kuhlala iyimfuneko eyimfuneko ukuze ungene kwisivumelwano nathi kwaye usenze sikwazi ukufezekisa uxanduva lwethu lwesivumelwano nawe. Awuphantsi kwesibophelelo esisemthethweni sokubonelela ngeDatha yakho yobuqu kuthi; Nangona kunjalo, ukuba uthatha isigqibo sokungasiniki idatha yakho yobuqu, asizukukwazi ukugqiba ubudlelwane besivumelwano nawe kunye nokuzalisekisa uxanduva lwethu lwesivumelwano nawe.
(C) Ukubhengezwa kweDatha yobuqu kubantu besithathu
Singazichaza iiNkcukacha zakho zobuqu kwamanye amaziko angaphakathi DataNumen, ukufezekisa izibophelelo zethu zesivumelwano kuwe okanye kwiinjongo zeshishini ezisemthethweni (kubandakanya ukubonelela ngeenkonzo kuwe kunye nokusebenzisa iiWebhusayithi zethu, ngokuhambelana nesicelocabumthetho. Ukongeza, sinokuveza iinkcukacha zakho ku:
abasemagunyeni kwezomthetho nabezolawulo, xa bekuceliwe, okanye ngeenjongo zokuxela nakuphi na ukwaphulwa kwesicelocabumthetho okanye ummiselo;
abagcini zincwadi, abaphicothi zincwadi, amagqwetha kunye nabanye abacebisi abaziingcali ngaphandle DataNumen, kuxhomekeke kwisibophelelo semvumelwano okanye uxanduva olusemthethweni lokugcina imfihlo;
Iiprosesa zomntu wesithathu (ezinje ngababoneleli beenkonzo zokuhlawula; iinkampani zokuhambisa / zokuhambisa; abathengi beetekhnoloji, ababoneleli bovavanyo lokwoneliseka kwabathengi, abaqhubi beenkonzo "zokuncokola" Ulawulo lweeasethi zamanye amazwe), naphi na apha emhlabeni, ngokuxhomekeke kwiimfuno ezichazwe apha ngezantsi kweli Candelo (C);
naliphi na iqela elichaphazelekayo, iarhente yokunyanzeliswa komthetho okanye inkundla, ukuya kuthi ga kwinqanaba elifunekayo lokuseka, ukusebenzisa okanye ukukhusela amalungelo asemthethweni, okanye naliphi na iqela elifanelekileyo ngeenjongo zokuthintela, ukuphanda, ukufumanisa okanye ukutshutshisa amatyala olwaphulo-mthetho okanye ukwenziwa kwezohlwayo zolwaphulo-mthetho;
Nawuphi na umntu ofumana (okanye) umntu ofanelekileyo, kwimeko apho sithengisa okanye sitshintshela yonke into okanye nayiphi na into efanelekileyo yeshishini lethu okanye iiasethi (kubandakanywa kwimeko yohlengahlengiso, ukuchithwa okanye ukupheliswa), kodwa ngokuhambelana nesicelocabumthetho; kwaye
IiWebhusayithi zethu zinokusebenzisa umxholo womntu wesithathu. Ukuba ukhetha ukunxibelelana nomxholo onjalo, idatha yakho yobuqu inokwabiwa nomboneleli wesithathu weqonga elifanelekileyo lemidiya yoluntu. Sicebisa ukuba uphonononge imigaqo-nkqubo yabucala yomntu wesithathu ngaphambi kokunxibelelana nomxholo wayo.
Ukuba sibandakanya iProsesa yomntu wesithathu ukuba siqhubekise idatha yakho yobuqu, siya kugqiba isivumelwano sokuqhubekeka kwedatha njengoko kufunwa sisicelocabImithetho enje ngeProsesa yomntu wesithathu ukuze iProsesa ibe nokuxhomekeka kwizibophelelo ezibophelelayo: (i) kuqhubekeka iNkcukacha zobuqu ngokuhambelana nemiyalelo ebhaliweyo yangaphambili; kwaye (ii) asebenzise amanyathelo okukhusela ukugcinwa kweemfihlo kunye nokhuseleko lweeNkcukacha zaKho; Kunye nazo naziphi na iimfuno ezongezelelweyo phantsi kweapplicabumthetho.
Sinokungazichazi iiNkcukacha zaBantu malunga nokusetyenziswa kweeWebhusayithi (umz., Ngokurekhoda ezo datha kwifomathi ehlanganisiweyo) kwaye sabelane ngedatha engachazwanga kunye namaqabane ethu oshishino (kubandakanya namaqabane eshishini lesithathu).
D) Ukuhanjiswa kweenkcukacha zobuqu zamanye amazwe
Ngenxa yobume beshishini lethu kwilizwe liphela, kusenokufuneka sidlulisele iiNkcukacha zakho kwi DataNumen Iqela, nakumaqela esithathu njengoko kuchaziwe kwiCandelo (C) elingentla, ngokunxulumene neenjongo ezichazwe kulo Mgaqo-nkqubo. Ngesi sizathu, singadlulisela iiNkcukacha zakho zobuqu kwamanye amazwe anokuba nemigangatho ephantsi yokukhuselwa kwedatha kune-EU ngenxa yemithetho eyahlukeneyo kunye neemfuno zokuthotyelwa kokuthotyelwa kweenkcukacha kwezo zisebenza kwilizwe okhoyo.
Apho sihambisa khona iiNkcukacha zaKho kwamanye amazwe, senza njalo, apho kufuneka khona (kwaye ngaphandle konikezelo oluvela kwi-EEA okanye eSwitzerland lusiya e-US) ngokwesiseko seMigangatho yesiVumelwano esiQhelekileyo. Unokucela ikopi yamaGatya esiVumelwano esiSemgangathweni usebenzisa iinkcukacha zonxibelelwano ezinikezwe kwiCandelo (M) elingezantsi.
(E) Ukhuseleko lweDatha
Similisele amanyathelo okhuseleko afanelekileyo obuchwephesha nawombutho ayilelwe ukukhusela iiNkcukacha zaKho ngokuchasene nokutshabalala ngengozi okanye ngokungekho mthethweni, ilahleko, utshintsho, ukuveza okungagunyaziswanga, ukufikelela okungagunyaziswanga, kunye nezinye iindlela ezingekho mthethweni okanye ezingagunyaziswanga zokwenza, ngokuhambelana ne-applicabumthetho.
Unoxanduva lokuqinisekisa ukuba nayiphi na idatha yobuNtu oyithumela kuthi ithunyelwa ngokukhuselekileyo.
(F) Ukuchaneka kweDatha
Sithatha onke amanyathelo afanelekileyo ukuqinisekisa ukuba:
IiNkcukacha zakho zoBuntu esiziqhubayo zichanekile kwaye, apho kukho imfuneko, zigcinwa zisemgangathweni; kwaye
nayiphi na idatha yakho yobuqu esiyiqhubayo engachanekanga (kuthathelwa ingqalelo iinjongo ezenzelwe yona) iyacinywa okanye ilungiswe ngaphandle kokulibazisa.
Amaxesha ngamaxesha sinokukucela ukuba uqinisekise ngokuchaneka kweNkcukacha zakho.
(G) UkuNcitshiswa kweDatha
Sithatha onke amanyathelo afanelekileyo ukuqinisekisa ukuba iiNkcukacha zaKho esiCwangcisiweyo zilinganiselwe kwiNkcukacha zaBantu ezifunekayo ngokufanelekileyo ngokunxulumene neenjongo ezichazwe kulo Mgaqo-nkqubo (kubandakanya nokunikezelwa kweeNkonzo kuwe).
(H) Ukugcinwa kwedatha
Sithatha onke amanyathelo afanelekileyo ukuqinisekisa ukuba iiNkcukacha zakho zobuqu zenziwa kuphela ngexesha elincinci elifunekayo ngeenjongo ezichazwe kulo Mgaqo-nkqubo. Siza kugcina iikopi zeDatha yakho yobuqu kwifomu evumela ukuchongwa kuphela okoko:
sigcina ubudlelwane obuqhubekayo kunye nawe (umzekelo, apho ungumsebenzisi weenkonzo zethu, okanye ufakwe ngokusemthethweni kuluhlu lwethu lokuposa kwaye awuzange ubhalise); okanye
IiNkcukacha zakho zobuqu ziyimfuneko ngokunxulumene neenjongo ezisemthethweni ezichazwe kulo Mgaqo-nkqubo, esinesiseko esisemthethweni esisemthethweni (umzekelo, apho idatha yakho yobuqu ifakiwe kumyalelo obekwe ngumqeshi wakho, kwaye sinomdla osemthethweni ekusebenzeni ezo datha ngeenjongo zokuqhuba ishishini lethu kunye nokuzalisekisa uxanduva lwethu phantsi kwesivumelwano).
Ukongeza, siya kugcina iiNkcukacha zaBethu ngalo lonke ixesha:
nayiphi na intocabIxesha lokunciphisa phantsi kwesicelocabumthetho (okt, naliphi na ixesha apho nawuphi na umntu enokuthi azise ibango elisemthethweni kuthi ngokunxulumene neDatha yakho yobuNtu, okanye apho iiNkcukacha zaKho zinokufaneleka); kwaye
ixesha elingangeenyanga ezimbini (2) emva kokuphela kwesicelocabixesha lokunciphisa (ukwenzela ukuba, ukuba umntu uzisa ibango ekupheleni kwexesha lokunciphisa, sisenikwe ixesha elifanelekileyo lokuchonga nayiphi na idatha yoBuntu efanelekileyo nebango),
Kwimeko apho naziphi na amabango afanelekileyo asemthethweni azisiweyo, singaqhubeka siqhubekeka iiNkcukacha zaKho zobuqu kumaxesha ongezelelweyo njengoko eyimfuneko ngokunxulumene nebango.
Ngamaxesha akhankanywe apha ngasentla ngokunxulumene namabango asemthethweni, siya kuthintela ukuqhubekeka kweDatha yakho yobuqu kugcino, kunye nokugcina ukhuseleko lweeNkcukacha zaKho, ngaphandle kwalapho kufuneka iiNkcukacha zaBantu zijongisiswe ngokunxulumene nayo nayiphi na ibango elisemthethweni, okanye naluphi na uxanduva phantsi kwesicelocabumthetho.
Nje ukuba la maxesha angentla, nganye ukuya kuthi ga kwinqanaba lokusebenzacabNgoku, sigqibile, siya kuyicima okanye siyitshabalalise ngokusisigxina iiDatha zoBuntu ezifanelekileyo.
(I) Amalungelo akho asemthethweni
Ngokuxhomekeke kwi-applicabUmthetho, unokuba nenani lamalungelo ngokubhekisele kuLungiso lweeNkcukacha zakho, kubandakanya:
ilungelo lokucela ukufikelela kwi, okanye iikopi zakho, zeNkcukacha zakho esiziqhubayo okanye esizilawulayo, kunye nolwazi malunga nobunjani, ukuqhutywa kunye nokuxelwa kwezo ziNgcaciso;
ilungelo lokucela ukulungiswa kwanoma yiphina into engachanekanga kwiDatha yobuqu esiyicubungula okanye siyilawule;
ilungelo lokucela, ngezizathu ezisemthethweni:
Ukucinywa kweDatha yakho yobuqu esiyiqhubayo okanye siyilawule;
okanye isithintelo sokuqhubekeka kweDatha yakho yobuqu esiyiqhubayo okanye siyilawule;
ilungelo lokuchasa, ngezizathu ezisemthethweni, ekuqhubekekeni kweDatha yakho yobuqu kuthi okanye egameni lethu;
ilungelo lokuba neeNkcukacha zaKho esizicwangcisayo okanye esizilawulayo zigqithiselwe komnye uMlawuli, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokusebenzacable;
ilungelo lokurhoxisa imvume yakho yokuSingathwa, apho ukuba semthethweni kokuqhubekeka kusekelwe kwimvume; kwaye
ilungelo lokufaka izikhalazo kuGunyaziwe woKhuseleko lweDatha malunga nokuPhathwa kweDatha yakho yobuqu kuthi okanye egameni lethu.
Oku akuchaphazeli amalungelo akho asemthethweni.
Ukusebenzisa elinye lala malungelo, okanye ukubuza umbuzo malunga nala malungelo okanye naliphi na elinye ilungiselelo loMgaqo-nkqubo, okanye malunga nokuPhathwa kweDatha yakho yobuqu, nceda usebenzise iinkcukacha zonxibelelwano ezinikezwe kwiCandelo (M) elingezantsi.
Ukuba sikubonelela ngeeNkonzo ngokusekwe kwiodolo, olo ncedo lweeNkonzo lilawulwa yimigaqo yesivumelwano oyinikiweyo. Kwimeko yokungangqinelani phakathi kwemiqathango nalo Mgaqo-nkqubo, le Polisi iyasebenzatary.
Icookie yifayile encinci ebekwe kwisixhobo sakho xa undwendwela iwebhusayithi (kubandakanya neeWebhusayithi zethu). Irekhoda ulwazi malunga nesixhobo sakho, isikhangeli sakho kwaye, kwezinye iimeko, ukhetho lwakho kunye nemikhwa yokukhangela. Sinokuqhubekeka iiNkcukacha zakho zobuGcisa ngetekhnoloji yecookie, ngokungqinelana neyethu Policy Cookie.
(K) Imigaqo yokuSebenzisa
Lonke usetyenziso lweeWebhusayithi zethu luxhomekeke kuthi Imigaqo yokuSebenzisa.
(L) UkuThengisa ngokuthe ngqo
Ngokuxhomekeke kwi-applicabUmthetho, apho ubonelele ngemvume ecacileyo ngokuhambelana nesicelocabUmthetho okanye apho sikuthumela khona intengiso kunye nentengiso zonxibelelwano ezinxulumene neemveliso ezifanayo neenkonzo, sinokuqhubekeka iiNkcukacha zakho zoBuntu ukunxibelelana nawe nge-imeyile, ngomnxeba, ngeposi ngqo okanye ngezinye iifom zonxibelelwano ukukunika ulwazi okanye iiNkonzo ezinokuthi zibe yomdla kuwe. Ukuba sikunika iinkonzo, singathumela ulwazi kuwe malunga neeNkonzo zethu, ukunyuselwa okuzayo kunye nolunye ulwazi olunokuba ngumdla kuwe, sisebenzisa iinkcukacha zonxibelelwano osinike zona kwaye sihlala sihambelana nezixhobocabumthetho.
Ungarhoxa kuluhlu lwethu lwe-imeyile zentengiso okanye iileta zeendaba nangaliphi na ixesha ngokunqakraza kwikhonkco elingabhaliswanga elifakwe kwi-imeyile nganye okanye kwileta esiyithumelayo. Emva kokuba uzibhalisile, asizukuphinda sikuthumelele ii-imeyile, kodwa sinokuqhubeka nokunxibelelana nawe ukuya kuthi ga kwinqanaba elifunekayo ngeenjongo zayo nayiphi na inkonzo oyicelileyo.
(M) Iinkcukacha zonxibelelwano
Ukuba unamagqabaza, imibuzo okanye inkxalabo malunga nalo naluphi na ulwazi kulo Mgaqo-nkqubo, okanye nayiphi na eminye imiba enxulumene nokuPhathwa kweDatha yobuNtu DataNumen, ndiyacela Qhagamshelana nathi.
'Umlawuli' Lithetha iziko elithatha isigqibo sokuba Idatha yobuqu iqhutywa njani kwaye kutheni. Kwimimandla emininzi, uMlawuli unoxanduva oluphambili lokuthobela usetyenzisocabimithetho yokukhusela idatha.
'Igunya loKhuseleko lweDatha' lithetha igunya elizimeleyo elinoxanduva ngokusemthethweni lokongamela ukuthotyelwa kwe-applicabimithetho yokukhusela idatha.
'I-EEA' Kuthetha uMmandla wezoqoqosho waseYurophu.
'Idatha yakho' lithetha ulwazi olumalunga naye nawuphina umntu, okanye ekubonwa kuye nawuphi na umntu. Imizekelo yeDatha yobuNtu esinokuthi siyenze Inkqubo inikwe kwiCandelo (B) apha ngasentla.
'Inkqubo', 'Inkqubo' okanye 'Inkqubo' Ithetha nantoni na eyenziweyo ngayo nayiphi na idatha yobuqu, nokuba iyenziwa okanye ayenziwanga ngeendlela ezizenzekelayo, ezinje ngokuqokelela, ukurekhoda, ukuhlela, ukugcina, ukulungelelanisa okanye ukuguqula, ukubuyisa, ukubonisana, ukusetyenziswa, ukubhengezwa ngokudlulisela, ukusasaza okanye ukwenza ukuba kufumaneke ulungelelwaniso okanye indibaniselwano, isithintelo, ukucima okanye ukutshatyalaliswa.
'Inkqubo' kuthetha nawuphi na umntu okanye iqumrhu eliqhubekekisa iiNkcukacha zaKho egameni loMlawuli (ngaphandle kwabasebenzi boMlawuli).
'Iinkonzo' Kuthetha naziphi na iinkonzo ezibonelelwa ngu DataNumen.
'Iinkcukacha zobuqu eziSebenzayo' kuthetha iiNkcukacha zoBuntu malunga nobuhlanga okanye ubuhlanga, izimvo zopolitiko, inkolo okanye ifilosofi, ubulungu bemanyano yabasebenzi, impilo yomzimba okanye eyengqondo, impilo yesondo, naziphi na izityholo zolwaphulo-mthetho okanye izohlwayo, inombolo yesazisi yelizwe, okanye naluphi na olunye ulwazi olunokuthathwa yiba novakalelo phantsi kwe-applicabumthetho.